Ny sakafo mediteraneana inona izany ary ny tombony azo? | Nutri Diet
Azo antoka fa efa nandre an-tapitrisany ianao, miresaka mpahay sakafo sy dokotera amin'ity firenena ity amin'ny tombony maro azony Sakafo Mediteraneana ho an'ny fahasalamana sy ny vatana. Ny sakafo Mediterane dia nanomboka taonjato maro ary fomba tena mahasalama ny famahanana izay arahin'ny tanàna rehetra amin'ny faritr'i Mediteraneana.
Betsaka ny firenena manaraka an'io karazan-tsakafo io: Espana, Italia, Sipra, Gresy na Portugal. Manaraka izany dia holazaiko aminao bebe kokoa momba ity sakafo ity izay mahasalama tena ho an'ny vatana ary tsy ho diso anjara ianao amin'ny sakafo isan'andro.
1 Mampiavaka ny sakafo Mediteraneana
2 Tombontsoa azo avy amin'ny sakafo Mediteraneana
3 Olana ankehitriny amin'ny sakafo mediteraneana
4 Loza ateraky ny sakafon'ny Mediteraneana nanjavona
Mampiavaka ny sakafo Mediteraneana
Tsy misy sakafo tokana mediteraneanina, misy karazany maro amin'ity karazana sakafo ity satria firenena maro no manaraka an'io karazan-tsakafo io. Na izany aza ary na eo aza ny fahasamihafana sy ny mampiavaka azy, ny sakafo Mediterane dia manana andiany endri-javatra mahazatra ary mizara amin'ny firenena rehetra izy ireo.
Ny singa lehibe amin'ny sakafo mediteraneana dia ny menaka oliva.
Fanjifana antonony amin'ny sakafo atoandro.
sakafo manan-karena amin'ny fibre toy ny voankazo, legioma ary legioma. Ny salady tsy maintsy eo amin'ny sakafo rehetra izy ireo. Ny tsara indrindra dia ny mihinana voankazo manodidina ny 3 isan’andro ary mihinana legioma indroa na intelo isan-kerinandro.
Raha ny fandrahoana sakafo, ny elaborations an'ny lovia tsotra izy ireo ary mitandrina tsara.
Amin'ity karazan-tsakafo ity dia kely ny fihinanana sakafo manankarena amin'ny proteinina, toy ny hena mena. Ny mifanohitra amin'izay, raha misy ny fisian'ny trondro na akoho amam-borona.
Fahita matetika ny fampiasana vokatra toy ny tongolo sy tongolo lay ary ampiasao ho toy ny fototra amin'ny fanomanana lovia samihafa.
Misy tsiro manokana ho an'ny Ny citrus ary noho ny tsiro asidra toy ny vinaingitra na voasarimakirana, samy be mpampiasa lovia vanim-potoana toy ny salady.
Ny sakafo amin'ny sakafo Mediterane dia matetika miaraka iray vera divay Rioja.
Rehefa manamboatra ny lovia sy ny fomba fahandro samihafa dia matetika ampiasaina ny karazan-vokatra vaovao, toy ny legioma, trondro na voankazo.
Fanjifana ny vary sy paty Amin'ity karazan-tsakafo ity dia mazàna avo dia avo, indrindra momba ny 3 na 4 isan-kerinandro.
Izany no antony tokony hanaovana ny marina kokoa noho ny tsy tokony hiresahana manokana ny sakafo mediteraneanina fiainana mediterania, satria fomba fihinana mihoatra ny fomba fihinana azy io dia fomba fiaina misy fomba amam-panao tena miavaka toa ny misento rehefa avy nisakafo.
Tombontsoa azo avy amin'ny sakafo Mediteraneana
Ny sakafo Mediterane dia manome tombontsoa ara-pahasalamana marobeAmbonin'izany rehetra izany dia manampy amin'ny fisorohana ny aretim-po sy ny soritr'aretina homamiadana. Hafahafa ihany, ireo tombontsoa ireo dia fantatra nandritra ny taona vitsivitsy, manokana izany tamin'ny taona 60 taorian'ny fandalinana nataon'ny Netherlands.
Ity fandinihana ity dia nanambara ny fahasamihafana lehibe nisy teo amin'ny isan'ny maty vokatry ny avy amin'ny aretim-po any amin'ny firenena toa an'i Etazonia miaraka amin'ny firenena hafa toa an'i Gresy. Io fahasamihafana io dia nateraka amin'ny karazana sakafo sy ny fomba fiainam-piainana notarihin'ny fiaraha-monina tsirairay. Taorian'ity fandalinana ity dia nekena izany ny tombontsoa marobe fa ny vatana dia manana sakafo mifototra amin'ny sakafo mediteraneanina.
Olana ankehitriny amin'ny sakafo mediteraneana
amin'izao fotoana izao Sakafo Mediteraneana tsy manana ny maha-zava-dehibe ny taona vitsivitsy lasa izay ary nafindra toerana amin'ny karazana sakafo hafa tsy dia be pitsiny sy tsy salama ho an'ny vatana. Ny ora fiasana lava sy ny fampidirana ny vehivavy amin'ny tontolon'ny asa dia nanjary safidy tsara kokoa ho an'ny karazana sakafo matsiro. Ankehitriny dia ny fizarana lehibe sy ny rojom-pifandraisana izay manjaka amin'ny tsena noho izany misy vokatra maro karazana mihinana.
Ireo antony rehetra ireo dia nahatonga izany Sakafo Mediteraneana nafindra toerana noho ny sakafo Anglo-Saxon izay manankarena kokoa tavy biby ary tsy dia salama sy mahasoa kokoa ho an'ny vatana noho ny sakafo mediteraneana.
Loza ateraky ny sakafon'ny Mediteraneana nanjavona
Na eo aza ny fampidirana tato ho ato ao amin'ny firenentsika karazana sakafo toy ny Anglo-Saxon mifototra amin'ny famelabelarana kely kokoa ny sakafo sy ny fisian'ny matavy karazana biby, manomboka tsikelikely fanentanana amin'ny ankamaroan'ny fiarahamonina ho an'ny sakafo ara-pahasalamana mahasalama kokoa noho ny tavy kely izay manome tombony betsaka amin'ny vatana.
Ny ankamaroan'ny mpahay sakafo sy manampahaizana manokana eto amin'ny firenentsika dia nanipika fa tena ilaina ny manaraka sakafo toy ny mediteranitra hisorohana ny mety ho aretim-po kardia, miray hina hatrany amin'ny fampandrosoana isan'andro ny fanaovana fanatanjahan-tena kely na fampihetseham-batana. Miaraka amin'ireo singa roa ireo izay mora sy tsotra loatra hanarahana azy, manome toky ireo manam-pahaizana fa ampy ny lanjan'ilay olona Ary tsy hisy karazana olana mavesatra loatra.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana eo amin'ireo tanora kokoa, ny tsiro ho nahandro be pitsiny kokoa toa ny Mediteraneana vita amin'ny sakafo mahasalama toy ny voankazo sy legioma, hanampiana azy ireo hanana fiainana salama tena lavitra tavy ratsy be ho an'ny vatana.
Tato anatin'ny taona vitsy lasa, ireo vondrona politika solontenan'ny Antenimieran-doholona dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana karazan-tsakafo toy ny Mediterane araka izay azo atao noho ny ireo tombony tsy tambo isaina manome izany ho an'ny zavamiaina. Noho io antony io sy noho ny fitomboan'ny fandraisan'anjaran'ny mpitondra espaniola sy ny haino aman-jery samy hafa dia tsy misy atahorana ny karazana Sakafo Mediteraneana mety hanjavona amin'ny sakafon'ny Espaniola.
Avy eo dia avelako ho anao ny horonan-tsary iray izay manazava azy ireo ny tombontsoa maro fa ny sakafo Mediteraneana dia mandray anjara amin'ny vatana sy ny fahasalaman'ilay olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo Mediteraneana
Vaovao tsy mahazatra momba ny kafe
Ataovy amin'ny alina ireto sakafo ireto mba hatoriana tsara kokoa